Horror – Categories – Channel Myanmar
Help Me Khun Pee Chuay Duay(2021)
Chucky 2021 ကလေးဘဝမှာဖြစ်ဖြစ် လူကြီးဖြစ်မှဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရှင်ချစ်သူအတော်များများချက်ကီဆိုတဲ့ အရုပ်ကိုမသိတဲ့သူ ရှားပါလိမ့်မယ်။အသက်ဝင်နေပြီး ဒေါသကြီးတဲ့ ရက်စက်တဲ့ လူသတ်အရုပ်လေးအဖြစ် သိကြမှာပါ။ချက်ကီမှာ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်တွေ တစ်ကားနဲ့တစ်ကား ကွဲပြားနေပါသေးတယ်။ဒီစီးရီးမှာလည်း ချက်ကီရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကိုပဟေဠိဆန်ဆန်လေးနဲ့ ကြောက်စရာကောင်းအောင် ပြသထားပါပြီ။ဇာတ်လမ်းကလည်း ဆန်းသစ်တာမို့ လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်၊ကြောက်စရာ အမျိုးအစားကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ အကြည့်သင့်ဆုံးစီးရီးပါပဲ။Rating လည်း 7.7 ဆိုတော့ ပေါကားမဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ Translated and Encoded by Mr. AndersonEpisode 1 (400MB)UsersDrive / Yoteshin/ MegaUp/ Mega.NZ/ StreamSB/ DirectLink / VIPEpisode2(400MB)UsersDrive / Yoteshin/ MegaUp/ Mega.NZ/ StreamSB/ DirectLink / VIPEpisode3(400MB)UsersDrive / Yoteshin/ MegaUp/ ...
Plerng Sanaeha (2019) Plerng Sanaeha (2019) အစအဆုံး " လောင်မြိုက်သောအချစ် " ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း________________________________ main cast အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကတော့ ခွန်ထင် အဖြစ် Noon waranut ခွန်ဆက် အဖြစ် Kelly Thanaphat မို အဖြစ် Donut Phattharaphon တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ရှင့်ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ခွန်ထင်ဆိုသူက မျိုးရိုးအသိုင်းအဝိုင်းကြီးမိသားစုထဲကမွေးဖွားလာပြီးစိတ်ထားဖြူစင်လှပလွန်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါအဲ့ဒီမိန်းမလှလေးကိုမှ ခွန်ဆက်ဆိုတဲ့ မျက်နှာများပြီးပွေရှုပ်တဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ကလိုချင်တပ်မက်စိတ်ဖြင့် သူမအချစ်ကို လှည့်ဖျားကာ အရယူခဲ့ရာ....တစ်နေ့တော့ လိမ်ညာခံလိုက်ရသောသူမအဖြစ်ကို သိသွားသောအခါ...မာယာများတဲ့ ပုရိသ ထိုယောကျာ်းကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ....ဘယ်လိုပြန်ကလဲ့စားချေမလဲ?အဲ့ဒါအပြင် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ အသက်အရွယ် ကိန်းဂဏန်းအပိုင်းအခြားထဲမှာကြုံတွေ့လာတဲ့ခွန်ထင် နဲ့ မို ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဟာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းပါမို ဆိုတဲ့ကောင်လေး က အချစ်ကို ကိုးကွယ်ပြီး တည်ကြည်ပြတ်သားတဲ့လူငယ် လေးတစ်ယောက်ပါ..ခွန်ထင် က တော့ အချစ်ကြောင့် နာကျင်ခံစားခဲ့ရဖူး တဲ့ အတွက် အချစ်ကို အယုံအကြည်မရှိခဲ့ပါ..ဒီလိုနဲ့ မို နဲ့ သူမရဲ့အချစ်ခရီးလမ်းလေးဟာ ...
I Know What You Did Last Summer (2021) I Konw What You Did Last Summer (2021)I Konw What You Did Last Summer Franchise ဟာ ရှေ့မှာမူဗီအနေနဲ့ ၃ ကားထွက်ထားခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၂၁ မှာတော့ စီးရီးအနေနဲ့ တစ်ဖန်ပြည်လည်ထွက်ရှိလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Mystery, Horror, Crime ဆိုတဲ့ Genre နဲ့အညီ တစ်ခန်းချင်းစီမှာ အလှည့်အပြောင်းများစွာနဲ့ အပိုင်းတိုင်းကို အသက်တောင်မရှူဝံ့ဘဲ ရင်တမမနဲ့ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာရှိတဲ့ လူငယ်လေးတစ်စုဟာ ဘွဲ့ယူတဲ့ညမှာ ပျော်ပါးနေကြရင်းနဲ့ မတော်တဆလူသတ်မှုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုမတော်တဆမှုကို ဘယ်သူမှမသိအောင် ဖုံးကွယ်လိုက်ကြပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေရာမှ တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ ထူးဆန်းတဲ့လူသတ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ အမဲလိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီလူသတ်သမားက သူတို့ကိုဘာလို့အမဲလိုက်နေရတာလဲ၊ သူတို့ရဲ့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ မတော်တဆဖြစ်ရပ်နဲ့ သက်ဆိုင်နေမလား၊ သူတို့ကိုအငြိုးတကြီးနဲ့လိုက်သတ်နေတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့လူသတ်သမားကရော ဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲ၊ နောက်ဆုံးသူတို့အားလုံးလွတ်မြောက်နိုင်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ။ဒီစီးရီးလေးဟာ စုစုပေါင်း အပိုင်း ၈ ပိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး စစချင်း ၄ ပိုင်းအရင်ထွက်ထားတာမို့ Channel Myanmar မှ ကနဦး ၄ ပိုင်းအပြင် အပတ်စဉ် ...
Chapelwaite(2021) Chapelwaite - Season 1(2021) =================ဒီတစ်ခါမှာတော့ CM ရဲ့ Horror ချစ် ပရိသတ်တွေအတွက် Chapelwaite ဆိုတဲ့ 2021 အသစ်ထွက် American Horror TV- series ကောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Season 1 မှာ အပိုင်း 10 ပိုင်း ပါဝင်မယ်လို့ သိရပြီး လက်ရှိမှာ4ပိုင်းထွက်လာပြီးတဲ့ Ongoing Series တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်IMDb rating 7.5 ထိ ရထားပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုတော့ အမေရိကန် စာရေးဆရာ Stephen King ရဲ့ Jerusalem's lot ဆိုတဲ့ ဝတ္တုတိုအပေါ် အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေး မိတ်ဆက်ရမယ် ဆိုရင်ဖြင့်... ငယ်စဉ်က ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အစွဲအလမ်းတစ်ခုကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ ချားစ်ဘွန်းဆိုသူဟာ ကုန်းမြေနဲ့ ဝေးရာကို ထွက်ပြေးရင်း ဘဝတလျှောက်လုံး ပင်လယ်ထဲမှာ ...
I See Dead People (2021) ' တတိယမျက်လုံး 'Castsပွန့်မ် အဖြစ် Mew Nittha တရီကန် အဖြစ် James Maဇာတ်လမ်းအကျဉ်းတရီနဲ့ ပွန့်မ်တို့က နယ်မြို့လေးတစ်ခုက ခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပါတစ်ရက် တရီတစ်ယောက် မိဘတွေ ကွာရှင်းမလိုဖြစ်လို့ မြစ်ဆိပ်မှာ ဝမ်းနည်းငိုကြွေးရင်း သရဲဝင်ပူးတာ ခံလိုက်ရပါတော့တယ်နတ်ဆရာမျိုးရိုးရှိတဲ့ ပွန့်မ်တစ်ယောက် တရီကို သရဲထုတ်ဖို့ အမျိုးမျိုးလုပ်ရာက နောက်ဆုံး ဖက်လိုက်ပေးမှ သရဲထွက်သွားခဲ့တယ်အဲဒီချိန်ကစပြီး သရဲတွေကို တရီမြင်လာရပြီး ပူးခံရတိုင်း ပွန့်မ်က ဖက်ရင်း ပြန်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ တစ်စုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့် ပွန့်မ်တစ်ယောက် ဘန်ကောက်ကိုထွက်သွားပြီး အဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက်တာမို့ တရီအနေနဲ့ လိုက်ရှာရပါတော့တယ်ဘန်ကောက်ကို ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ တရီတစ်ယောက် အပျိုကြီးမမဖြစ်တဲ့ ဟီဒေကို့အသက်ကို ကယ်မိရာက ဟီဒေကိုရဲ့စားသောက်ဆိုင်နဲ့ အိမ်မှာဝင်ကူရင်း ပွန့်မ်ကို ရှာဖွေပါတော့တယ်တရီတစ်ယောက် ပွန့်မ်ကိုတွေ့နိုင်ပါ့မလား ပွန့်မ်ကရော ဘာအကြောင်းကြောင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တာလဲ ဝဋ်ကံကြီးတဲ့အတွက် သရဲတွေချုပ်ကိုင်တာခံနေရတဲ့ တရီကို ကယ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်ကံကြီးတဲ့ ပွန့်မ်ကပဲ ကယ်တင်နိုင်မလားဆိုတာအပြင် အကူအညီတောင်းတဲ့ သရဲတွေကို ...
Midnight Mass(2021) Midnight Mass(2021) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း***********************************IMDb...8.0အပိုင်းသစ်( ၁ မှ ၇) ထိ စ/ဆုံးThe Haunting of Hill House , Doctor Sleep နဲ့ Gerald's Game တို့လိုအမိုက်စား Horror တွေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Mike Flanagan ရဲ့ စီးရီးသစ်လာပါပြီဗျာ...လူဦးရေထူထပ်ပြီး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးကြသော ခရော့ကတ်ကျွန်းလေးမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လို့လာပါတယ်...မြို့ထဲကို ပေါလ် ဆိုတဲ့သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးရောက်လာပြီးနောက်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်...ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူ ကမ်းခြေတွင်ကြောင်သေအလောင်းများ ပျံ့ကျဲကာတင်ကျန်လျက်ရှိကာဘာကြောင့်သေနေရတယ်မသိခဲ့ရ........ ရိုင်လီတစ်ယောက် ပြူတင်းပေါက်ကနေလှမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့ လေတွေမိုးတွေကြားမှစစ်မိုးကာနဲ့လူကြီးတစ်ဦး..... ရိုင့်လီရဲ့ညီလေးတွေ့လိုက်ရတဲ့ အမှောင်ထဲကမျက်လုံးဝင်းဝင်းကြီးတစ်စုံ......မြို့နယ်ဆရာဝန်မလေးရဲ့ မိခင်အိုကြီးလည်းမူမမှန်ဖြစ်လာတယ် ဒါတွေဟာစိတ်ထင်နေတာတွေလား ....ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကို Supernatural horror ဆန်ဆန် Mystery ဆန်ဆန်ကြည့်ရှုခံစားရမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်..... Episodes :7Quality : NFWeb-dl 720p Format…mp4 Duration…00:55:00 Genre : Horror, Mystery , Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...
Reuan Rom Ngiw (2021) Reuan Rom Ngiw-ရန်ငြိုးမပျယ်သောစံအိမ်( (2021)ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း*****************************************************************အပိုင်းသစ်(၁ မှ ၂၇ ထိ)စ/ဆုံးမာလိုင် အဖြစ် Pinky Savika ဒတ် အဖြစ် Golf Anuwat လွမ် အဖြစ် Aun Witayaတိတ်ဆိတ်တဲ့ညမှာ သူခိုးဓားပြအဖွဲ့ဟာအမှောင်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး လူသူအစောင့်ကင်းမဲ့တဲ့စံအိမ်ကြီးတစ်ခုထဲကို ဝင်လာကြတယ်...အံအားသင့်စရာကောင်းတာက အစောင့်မရှိ လူမရှိတာတောင်မှ စံအိမ်တော်ကြီးထဲမှာအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုတစ်လေတောင်မပျောက်ဘဲတည်ရှိနေတာပါပဲ...သူခိုးတွေအတွက် ပွပေါက်ပေါ့...တန်ဘိုးကြီးတဲ့ရွှေကလပ်တွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေယူနေတုန်းမှာပဲ ဗြုန်းဆိုမျက်နှာကျက်နဲ့ နံရံမှာ သွေးကွက်တွေပေါ်လာတယ်...အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သရဲမဟာ ဒီစံအိမ်ထဲဝင်ပြီး ပစ္စည်းတွေခိုးတဲ့သူတွေကို ဂုတ်ကိုခွစီးပြီး လည်ပင်းတွေချိုးပစ်လိုက်တယ်....ဘဝခြားနေတာတောင် ဒီသရဲမဟာ လူတွေကိုသတ်ပစ်နိုင်စွမ်း ဝင်ပူးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အငြိုးကြီးသရဲမဖြစ်ပုံရပါတယ်....တကယ်တော့ဒီခြံကြီးနဲ့အိမ်မှာပိုင်ရှင်တွေရှိပါတယ်...အိမ်ကြီးကိုရောင်းချင်ပေမဲ့ သရဲကြမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ရောင်းဖို့ခက်ခဲနေတာကြောင့်အတော်ဆုံးအောက်လမ်းဆရာကိုပင့်ဖိတ်ပြီး သရဲမကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်....သရဲမဟာ ပရိတ်ကြိုးလိုအရာမျိုးတွေကိုဖြတ်ပစ်တဲ့အပြင်အောက်လမ်းဆရာကိုရော အိမ်ပိုင်ရှင်လင်မယားကိုပါထပ်သတ်ပစ်လိုက်တယ်...အဲ့ဒီနောက်မှာတော့...ဒီကားလေးကတော့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေနဲ့ မစိမ်းလှတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စီနီယာ မင်းသမီးကြီး Pinky ပါဝင်ထားတဲ့ သရဲကားပါ....ဘယ်လိုအငြိုးအတေးတွေကြောင့် မကျွတ်မလွတ်တဲ့သရဲမဖြစ်လာတာလဲ...ဒီစံအိမ်ကြီးဟာရှေးတုန်းက ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေရှိခဲ့တာလဲ...သူမကို ဒီလိုဘဝမျိုးတွေဖြစ်အောင်ဘယ်သူတွေကလုပ်ခဲ့တာလဲ...စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ဒီထိုင်းစီးရီး" ရန်ငြိုးမပျယ်သောစံအိမ် " ကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါဉီး.... [ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို Mann Mawkunn မှ ရေးသားပေးထားပါသည်] Drama: ...